मे | 2009 | BIVAS
एमालेमा पहिरो, माओवादीमा ओइरो
४. प्रभाकर गुप्ता -जिल्ला सदस्य तथा विरगञ्ज नगर इन्चार्ज, अनेरास्ववियु
५. अजितकुमार शाह -जिल्ला सदस्य तथा क्षेत्रीय इन्चार्ज, अनेरास्ववियु
६. राजेश गुप्ता -जिल्ला सदस्य, अनेरास्ववियु
म ८-९ कक्षामा पढ्दादेखि नै पुष्पलाल समूहमा संगठित भईवामआन्दोलनमा सक्रिय हुंदै आएको थिएं । अर्घाखांचीमा २०२८/२९ सालतिर सामन्ती शोषणका विरुद्धको अभियानमा लाग्दा थुनुवामा समेत परेको थिएं । २०३२ सालको विद्यार्थीआन्दोलनमा मेरो सक्रिय सहभागिता रहिआएको थियो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो ठाउंबाट सक्दो भूमिका खेलेको थिएा । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ सालमा माले र त्यसपछि नेकपा एमालेको संगठित सदस्य भई अविछिन्नरूपमा पार्टीका विभिन्न जिम्मा लिई सक्रियताका साथ काम गरिरहेको थिएं । नेकपा एमालेको पांचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको आर्थिक पक्ष निर्माणदेखि पार्टीको आर्थिक फांटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थिएं। २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भईबजेट र कार्यक्रम निर्माणमा अहम भुमिका खेलेको थिएं । २०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत निर्वाचित भएको थिएं । पार्टीको संगठित सदस्य लिएयता अविछिन्नरूपमा आर्थिक फांटसंग सम्बन्धित विभागहरूमा रही पार्टीको काम गर्दैआएको थिएं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को संस्थापक उपाध्यक्ष हुंदै सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको थिएं । वाम बुद्धिजीवीहरूबाट एमाले क्रमशः दक्षिणपन्थि भासमा जांदैछ भन्ने टिकाटिप्पणी हुंदै आएको थियो । म स्वयम आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनबाट एमालेप्रति झस्केको थिएं । मैले उक्त महाधिवेशनको समूहगत छलफलमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न विषयमा फरक मत र दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरेको थिएं । उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन आफैंमा अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण छ । राजनीतिक प्रतिवेदनको पेज १८९ मा ‘यतिबेला सामन्ती, प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरू नै नेपाली जनताका प्रधान शत्रु वा निशाना हुन् भनियको छ । तर, त्यही प्रतिवेदनको पेज २२८ र २२९ मा भनिएको छ- “यतिबेला अर्धसामन्ती अर्थतन्त्र विस्तारै विघटनतिर जांदैछ…. । अहिलेको संक्रमणकालमा नेपाली समाज अर्धपुंजीवादी चरित्र लिएर अगाडि बढ्दैछ…. । अर्थतन्त्रको अर्धसामन्ती चरित्र विघटनतिर जाने अवस्थामा समाजमा सामन्तीवर्गसाग प्रधान अन्तरविरोध कसरी हुन सक्दछ ? त्यस्तै प्रतिवेदनको धेरै ठाउामा जनताको प्रधान अन्तर विरोध दलाल नोकरशाही पुंजीवादसंग समेत रहेको कुरा गरिएको छ । अर्धपुंजीवादी अवस्था र दलाल नोकरशाही पुंजीवाद के एउटै हुन् ? अझ सिङ्गो दस्तावेजमा दलाल, नोकरशाही पुाजीवाद’bout स्पष्ट गर्नेर त्यसलाई कसरी समाप्त गरिनेछ भन्ने चर्चासमेत छैन । यसरी अहिले दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूसंग सांठगांठ गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन कार्य नेकपा एमालेबाट भएको छ । त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रधान अन्तर विरोधसम्बन्धी उसको ठहर विपरीत छ । अब एमालेका लागि यथास्थितिवादी शक्ति को हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था खडा भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीलाई माइनस गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, नयां संविधान निर्माण गर्ने अवस्था हुनै सक्दैन । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयलाई सच्याउने नाममा जुन उल्ट्याउने कार्य वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट भइरहेको छ, यसले मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरिंदैछ भन्ने मलाई लाग्छ । माओवादीलाई पन्छाएर जुन अगाडि जाने प्रयास गरिएको छ, यो धेरै दिन टिक्दैन । अहिलेको बटम लाइन भनेकै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम, सच्याउने र नयां ढङ्गले नयां १२ बुंदे सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हो । एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो सरकार धेरै दिन टिक्छ भन्ने मलाईलाग्दैन ।
० एमालेलाई अहिले सरकारमा जाँदा ठूलो घाटा पुर्‍याउँछ भन्ने छ नि ?
हत्याको वास्तविकता रहस्यमै बेला एमाले बरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले मदन भण्डारि आफ्नै कारण मारिएका दावी गर्नुभएको पुष्टि भएको छ ।
‘माधब नेपालले भने, मदन भण्डारी उनकै कारण मारिए’ शीर्षक दिएर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधब नेपालबीच भएको सम्वादको हवाला दिँदै आज प्रकाशित जनदिशा दैनिकले समाचार छापेको छ । Read the rest of this entry »
Posted by CHINTAN on मे 30, 2009 in NEWS
खनाल माओवादीमा पसेपछि एमालेमा खैलाबैला
माओवादीमा प्रवेश गरेका खनाल दम्पति
एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको एक साता पनि नबित्दै एमालेका एक नेताले आफ्नी पत्नीसहित उक्त पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
एमाले नेता एवं पूर्व सांसद डा. डिल्लीराज खनालले एमाले परित्याग गरी एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् । डा. खनालले एमालेका आर्थिक विभागमा बसेर काम गर्दै आएका थिए । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुन् । उनकी पत्नी मीना खनाल पनि माओवादी प्रवेश गरेकी छिन् ।
राजधानीमा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले डा. खनाल दम्पत्तिलाई अबीर र माला लगाएर आफ्नो पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । आठौं महाधिवेशनले दिएको मार्गदर्शन विपरीत पार्टी लागेकाले त्यसप्रति चित्त नबुझेर आफूले एमाले परित्याग गरेको स्पष्टोक्ति डा. खनालले दिएका छन् ।
अर्थविद् समेत रहेका डा. खनालले एक्कासी पार्टी परित्याग गरी माओवादीमा पसेपछि अहिले एमालेमा खैलाबैला मच्चिएको जानकारि छ ।
माओवादी तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमाः बाबुराम